Maxay tahay muhiimadda ay MOOYAALE u leedahay mujtamaca Soomaaliyeed?! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Maxay tahay muhiimadda ay MOOYAALE u leedahay mujtamaca Soomaaliyeed?!
Maxay tahay muhiimadda ay MOOYAALE u leedahay mujtamaca Soomaaliyeed?!
(Hadalsame) 12 Dis 2020 – Mooyaale fogaan ahaan caasimadda deegaanka ee Jigjiga waxay u jirtaa 1630 KM. Sidoo kale caasimadii hore ee deegaanka ee Godey, waxay u jirtaa 1050 KM.
Waa magaalo xuduuddeed u dhaxaysa Kenya iyo Ethiopia, waa magaalo ganacsi iyo marin muhiim u ah ilaha ganacsiyeed, waxaa degan qabaa’ilka Soomaaliyeed ee Garre iyo Gabre iyo kuwo kaloo badan.
Mooyaale waxaan ka soo shaqeeyay muddo 4 sano iyo dheerad ah:
Mooyaale haddaanay reerahaa Soomaaliyeed joogin maanta lagama hadleen ee magaalo cid kale leedahay ayay noqon lahayd, Mooyaale reerahaa Soomaaliyeed ee degan moyaane hadday reeraha kale ee Soomaaliyeed oo dhami joogi lahaayeen waa hore ayay iskaga soo yaaci lahayeen!
Xaqiiqdii culayska Soomaalinimo loogu hayn jiray dadkaasi ma aha wax aan qoraal idinku sheegi karo ee waxaan tusaale idiin siinayaa dhibka Mooyaale wuxuu badaley luuqdadoodii oo ay ku hadlaan afka qoomiyadda la degta si aanay Mooyaale u banayn!
Mooyaale oo billaa Garre ah, gumaystuhu muxuu doonay oo uu geeri kala laabtey!
Geeridu maxay caadi noqotay, oo geeshash la xasuuqay goobtan Mooyaale
Geesiyaal halgamay iyo, taariikho guluf collaadeed ah goorkastaba kasoo jiray
Ha hilmaamin Jenaraladii Xasan Goore, iyo Cabdilahi Gammaas iyo Guurtidii mudnayd waxay usoo galeen goobtan Mooyaale!
Mooyaale oo billaa Gabre ah waa hore ayay gacan ka bixileyde gumaystuhu muxuu dhibay tolkaas goor iyo ayaanba kala guray dadkoodii oo qayba garab raacshay!
Dhibku waa ugaar reerka geesyaale! Ma ilaashanaateen Mooyaale haddaan geesiyada Gabre geestooda Soomaalinimo ku difaacan!
Guushu waa isgarabsiiye haddaan loo gudin qaadan oon Garre iyo Gabre midnimo gees isugu raacin, gumaystuhu ma maageen dadyahaw ee Geesiyaa jooga goobtan Mooyaale!
?????????? ?????? ?? ????????? :
Xiliyadii adkaa ee Mooyaale dadka degaa waxay taariikh aan go’ayn u hayaan hoggaanka siyaasiga ah ee Soomaalida seddex xubnod oo kala ah:
· Dr Cabdimajiid Xuseen (AHN) oo Mooyaale qaybtooda degmo uga dhigay xukumaddii fedaraalka Ethiopiana ka dhaadhiciyay inay xal qaran tahay hal magaalo-xuduuddeed dhanka Ethiopiana laba qomiyadood degaan inay laba degmo kala noqoto Soomaali iyo Oromo.
· Mw hore DDS mudane Khadar Macalin oo xili xaaladu adkeyd garabsiiyay waxqabadka Mooyaalada maantana sal u ah.
· Mw hore Soomaaliya mudane Maxamed Siyaad Barre (AHN) oo aan isna dayicin Soomaalinimo wakhtigiisi taariikh mug lehna halkaas ku leh.
Xukuumad ahaan iyo bulsho ahaanba Soomaalidu maanta Mooyaale iyadaa iska leh ee yaanay iska dayicin!
Halagu soo xidho degaanka Soomaalida intiisa kale, oo misaaniyad culus ha loo huro, sida jid laami ah oo loo sameeyo, buundo ganacsi oo tayo leh oo la saaro wabiga Daawa, Fursadeheeda ganacsi oo laga faa’iidaysto, dekadaha geeska oo lagu soo xidho sida badacas.
Dawladu misaaniyad culus ha u qabato degaan ahaan iyo fedaraal ahaanba macdanta ceegaagta Mooyaale dhanka Soomaalida ee la iska duljoogo markii dawlad maalgalisa la waayay dadkaasina waddaniyad u ilaashado.
Bulshadda Soomaalidu baylahdeedi hore ee Mooyaale maanta oo xili casriya lagu jiro ha ugu abaalgudo laahansho ay u ilaashato Mooyaale. Nabad ku wada noolansho iyo deriswanaag ay u abuurto Mooyaale.
Kawada faa’iidaysiga fursadaha Mooyaale oo dhuunta ganacsiga ee geeska Africa ah iyada oo dadka degaana soo dhawayn mug leh u hayaan Soomaalinimo iyo isdhexgalka bulshadda.
Mooyaale waa dariiqa ganacsi ee xoolaha nool ee geeska Africa, maadama Soomaalidu xaga xoolaha wax ka fahanto, maalinkii waxaa ka soo talaabi kara in ka badan 10kun oo neef oo geel iyo adhi ah oo Khaliijal Carab aad looga rabo
In ka badan 10kun neef oo lo ah oo laga rabo galbeedka iyo bariga aduunka, markaa fursada ganacsi ee Mooyaale yaan loo deymo la’aanin. Dad badani waxay is waydiin Mooyaale maxaa ka jira!? Haddaba Mooyaale waa meel “strategy” ah oo lagula degan yahay, horena colaado iyo cidhiidhi laguugu muquunin kari waayay, balse waxaa maanta lagugu muquunin karaa hirgalinta siyaasad horumarineed iyo ka faa’iidaysiga fursadeeda dhaqaale.
Waayo dad kaa badan bulsho ahaan iyo dhaqaalena ahaana kaa sareeya siyaasaddana kaa horeeya ayaa kula degan. Markaa Mooyaale waa Mooyaale kumee?.
Hadhaw bay odhan laylama hadlinoo
Layma heesine doob hurdaa helay!
Waxaa qorey: Xil. Nadiir Yuusuf
Previous article”Haddii uu Webiga Shabeelle toos ugu darsami lahaa Badwaynta Hindiya gobol dhan ayaan webi yeelan lahayn” – Soo jeedin muhim ah
Next articleSaxariirta ay shirkadda dhiig-miiradka ah ee SAHAL ku hayso shacabka safraya oo heer cusub gaartey (Arag dhibaatadan)